Cali Daahir Ciid oo loo doortay madaxweyne ku xigeenka Galmudug. – Hornafrik Media Network
Cali Daahir Ciid oo loo doortay madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta madaxweynaha cusub ee maamulkaasi u doortay, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday maagaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxuuna kusoo baxay 66 cod oo ka mid ah 77 cod oo la dhiibtay.
Intaasi kadib ayaa waxa ay xildhibaanadu guda galeen u codeynta musharraxiinta u taagan xil ka madaxweyne ku xigeenka, kuwaas oo gaarayey shan musharrax.
Shanta musharrax ayaa waeeegii koowaad kala helay, Cabdiqani Sheekh Cali Diini 26 cod, Cali Daahir Ciid 26 cod, Maxamed Xaashi Cabdi Carabey 12 cod, Saadaq Cabdullaahi Xaashi 7 cod iyo Axmed Taajir Yuusuf Warsame oo isna helay 6 cod.
Sidoo kale waxaa wareega labaad u gudbay afarta musharrax ee ugu codadka badnaa wareega 1-aad, balse inta aysan bilaaban codeynta ayaa waxaa taanusalay musharraxiinta Maxamed Xaashi Cabdi Carabey iyo Saadaq Cabdullaahi Xaashi.
Sidaas daraadeed waxaa wareega labaad oo aad u adkaa ku tartamay, Cabdiqani Sheekh Cali Diini iyo Cali Daahir Ciid oo min 26 dhibcood kala helay wareegii 1-aad.
Sida uu shaaciyey guddoomiye Gacal waxaa ugu dambeyn xil ka madaxweyne ku xigeenka Galmudug ku guuleystay musharrax Cali Daahir Ciid oo helay 46 Cod halka Cabdiqani Sheekh Cali Diini uu helay 31 Cod.
Cali Daahir Ciid oo ku soo baxay xil ka madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa ka mid ahaa shaqaalaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Doorashadaan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo horay garabka Ahlu-Sunna Dhuusamareeb ugu doorteen Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan inuu noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug,
Mareykanka oo Qoor-Qoor u aqoonsaday madaxweynaha Galmudug